Ny Rado Rafalimanana Nifanjevo tamin’ny zandary…
Philippine Tifirina ho faty izay tsy manaja ny fihibohana
Maherin’ny 50 000 ny maty maneran-tany, ary ary efa maherin’ny 1 tapitrisa ny olona voamarina fa tratry ny Covid 19, ka ny 500 000 amin’ireo dia any Eoropa avokoa. Mbola ho sarotra ny ady, raha jerena amin’ny fitomboan’ny olona maty, indrindra ireo any amin’ireo ivon’ny aretina amin’izao fotoana izao. Voasokajy ho krizy mafy indrindra teto ambonin’ny tany taorian’ny ady lehibe faharoa no lalovan’izao tontolo izao ankehitriny.
Rwanda Aterina isan-tokatrano ny vatsy tsinjo
Mbola manaporofo hatrany ny maha mpitarika (leader) azy ny filoham-pirenena any Rwanda, Paul Kagame.
Tanàna any Sina Afaka hifamezivezena amin` izay afa-tsy Wuhan sy Hubei
Na dia nihena aza ny herin` ny aretina “coronavirus » any Sina, dia miahiahy indray ireo manampahefana sinoa amin' ny fahatongavan' ireo zotra an`habakabaka avy any ivelany.
CORONAVIRUS MANERAN-TANY 2700 MAHERY NO MATY TAO ANATIN’NY 72 ORA
Niakatra izay tsy izy ny maty tao anatin’ny 72ora. Raha 11 147 izany maneran-tany ny zoma teo tamin’ny 10 ora alina, dia 14 376 kosa izany omaly alahady tamin’ny 11ora alina, izany hoe nisy olona maty vaovao 2729.
CORONAVIRUS Mitombo isa hatrany ireo marary maneran-tany
Eoropa:mihazakazaka ny fiparitahan’ny aretina Efa mihoatra ny 200 000 nanomboka omaly tolakandro ny olombelona voan’ny Coronvirus amina firenena 156 maneran-tany; 214 010 no voambara fa tratran’ity valan’aretina ity arak any tarehimarika nivoaka omaly 18 martsa tamin’ny 10 ora sy sasany alina, ora eto
Feno sakana isan-karazany ny lalanay. Nihitsoka amin’ny lalam-potaka ireo kamio be dia voatery manao “transbordement” izahay.
Na ireo zandary irahinareo aza dia mahatsapa fa antony tsy mitombina ny hanaovana anay teo Marozevo, Vohidiala, Sahabe Morarano Chrome, hoy ny Rado Rafalimanana omaly, raha nihazo an’i Tanambe any Alaotra hitondra fanampiana ho an’ny traboina izay voasakantsakana teny an-dàlana. Milaza ny zandary izay mitam-basy, fa nahazo baiko avy amina kolonely tsy hamela anay handeha, hoy izy. Namaly bontana kosa ny avy amin’ny zandarimaria, fa vao nandalo voina ny faritra Alaotra Mangoro, ka noho izany dia mila arahi-maso daholo ny fandalovana amin’ireny toerana vao avy namboarina ireny. Nosavaina ny taratasy sy ny fanamarinana ny entana, saingy teny an’avona no navaly chef de poste tao Vohidiala hoe: na inona na inona ataonareo, dia izahay tsy maintsy mandeha, hoy ny fanazavana. Fiara mirotoroto, ary saika voadona ary maty raha tsy nahay niala ny zandary, hoy ny fanazavana avy amin’ny zandary. Mbola afaka teo Amparafaravola, ary nandeha mafy ka teo Ambohijanahary 8km tsy hidirana an’i Tanambe no voasakana. Fandikan-dalàna noho ny tsy fanekena fampijanonana sy ny tsy haneho ny taratasy, hoy ny zandary. Araka ny andininy faha-121 amin'ny didim-panjakàna 63-253 ny 09 mey 1963 mamaritra ny asan'ny zandarimariam-pirenena dia azo atao ny mampijanona amin'ny fomba rehetra ny olona tsy manoa ny fampijanonana rehefa avy nampitandremana in-telo, hoy hatrany ny fanazavana. Isaorana Andriamanitra tsy notifirina izy fa mbola mandala ny fihavanana ny zandary tao an-toerana ka mbola nomena fampitandremana am-bava fotsiny ihany, hoy ny zandary. Tsy misy resaka fisavana “papier” fa baiko, hono ny azy ireo, hoy kosa i Ny Rado Rafalimanana. Inona no tsy nanomezana ny antontan-taratasy hosavana raha mitombina tokoa ny fanazavan’ny zandary ? Fanampiana amin’ny maha olona (aide humanitaire) ary maika noho ny voina mahazo no hoentina ka hisiana sakantsakana izay mety ho baiko politika raha ny fandraisan’ny an-kilany azy. I Ny Rado Rafalimanana moa dia efa naneho fa izy no Ambasadaoron’ny WFDD (World Fund Development and Planning) izay rantsan’ny Firenena Mikambana ka 25 tapitrisa dolara no natokan'ny WFDP hotantaniny. Sao dia mahatsiaro tena ho takona ihany koa ny fanjakana dia mandeha ny antsojay? Lasa adihevitra ity raharaha ity!